Wholesale High-Technical air purifier rambi Hood 833 Manufacturer and Supplier | ARCAIR
Yakakwirira-Technical air purifier rambi hood 833
Yakasarudzika uye fashoni mwenje hood dhizaini inokwezva maziso ako pakutanga kuona.
DC inverter mota ine akawanda Extraction rate kuburikidza ne3 kumhanya Kubata Kudzora;
Kudzokorodza kwakazara kunovhenekera kunhuhwirira kwekubikira, kuunza mweya mutsva kukamuri yako;
zvakare inogona kushandiswa semhepo yekuchenesa.
Mukati meUV LAMP inonyanya kuchenesa uye kukuunzira mweya wakachena.
Ventilation Modes chete ine recirculation inoda kuiswa nekabhoni mafirita kana plasma sefa (isina kuisirwa)
Yakasarudzika uye fashoni mwenje hood dhizaini inokwezva maziso ako pakutanga kuona. Iyi hood yemwenje ine hombe yemagetsi DC mota uye centrifugal feni inopa yakasimba yekukweva simba, yakaderera ruzha, isina-tsvimbo girisi sefa, kubvisa huwandu hukuru hwehutsi uye hwema hwekubika kubva mukicheni nyore.
Kubata kutonga kwakanaka, kwakasarudzika mamiriro, kunounza kunzwa kwekunaka.
Easy shanda 3 kumhanya kudhirowa kwakagadzirirwa akasiyana ekubika marudzi, chengetedza kicheni yako nyowani uye yakachengeteka kuti unakirwe nenguva yekubika yemhuri yako. Zvimwe zvingasarudzika zvakakosha fucntion yeiyi hood: Remote control rega yako yekubika kutonga kuve nyore inogona kuidzora kunyangwe iri kure zvishoma. WiFi ita kuti hupenyu hwako hwekubika huwedzere samrt zvekuti iwe unogona kuvhura hood uye mwenje nefoni yako usati wasvika kumba. Ipapo mhepo inogona kuwedzera kutsva paunosvika uye chiedza chinodziya mukicheni chinokugamuchira iwe kumba.
Yakakwira tekinoroji yePlasma sefa iyo isingangove nebasa remarasha sefa asi inogona kubvisa microscopic organic kabhoni makomisheni akadai seanhuwi mamorekuru. Iwe unodzivirirwa zvakachengeteka kubva kuhutachiona, hutachiona, spores uye kupararira kwavo.
Mamorekuru, akadai semajemusi uye hwema, akaputsika padanho remamorekuru. Iyo electrode yeplasma inogadzira zvigadzirwa zveokisijeni, zvakaita seozone, izvo zvinodiwa kurapa mamorekuru.Unowana mweya wakachena - oxygen, humidity, uye CO2.
Inoenderana nemhoteredzo, inoshanda uye inobatsira kuchengetedza magetsi: iyo yemukati aerodynamics inogadziriswa kuti iite kuti vanyarare.
Iyo hood yemwenje inorembera padenga neabrasion-inodzivirira simbi tambo (inochinjika kureba zvinoenderana nehupamhi hwesirin'i); Iyi hood yemwenje inongoshandiswa mukuita recirculation iyo inofanirwa kunge iine kabhoni kana plasma sefa.
Chiedza Chekuchengetedza Simba
8W LED pani ine maviri anomhanya dimmer, inogona kugadzirisa mwenje wakasiyana sezvaunoda, inonyatso kuvhenekera iwe nzvimbo yekushandira panguva yako yekubika uye inogona kujeka murima neyakagadzirwa zvakanaka.
Iyo hood yemwenje inoshandisa zvemhando yepamusoro zvinhu uye inogadzirwa neyakagadziridzwa dhizaini, inogona kushandiswa semwenje wedenga.
Zvakapfuura: Yakakwirira End T-Shape Yakazara LED Panel Island hood 810
Cooker Hood Aluminium Sefa
Cooker Hood Baffle Sefa
Cooker Hood Carbon Sefa
Cooker Hood Grease Sefa
Girazi Cooker Hood
Mazuvano Range Hood
Batanidza Cooker Hood
Kuyerera kwemhepo: 750 m³/h
Motokari mhando: 1x210W
Kudzora Rudzi: Bata Kudzora / Wifi control
Nhamba Yekumhanya: 3
Kuvhenekera: 1xLED mhete bhodhi
Sefa Rudzi: 1pcs sefa
Mhepo Outlet: 150mm
Kurodha QTY(20/40/40HQ): 192/400/400
Ruvara: Nhema / Ichena / Bhuruu / Girini / Goridhe / Purple
Motokari: DC 650m3/h
Sefa basa: HEPA sefa
Yakagadzirwa Island Cooker Hood 820
Yakakosha Yakagadzirwa Island Cooker Hood 826